Tsy mifandamina… tsabahin’ny vahiny | NewsMada
Tsy mifandamina… tsabahin’ny vahiny
Hanao ahoana ihany ny ho toeran’ny mpanohitra eny anivon’ny Antenimierampirenena? Na ho tafavoaka ihany ny sata mifehy ny mpanohitra sy ny fanoherana… Tsy mora ny raharaha? Ao anatin’ny paipaika sy ny kajikajy politika hatrany tsinona izay atao rehetra: ady fiady… Politika io, arakaraka ny fifandanjan-kery. Eo koa ny tombontsoa iadiana na arovana, arakaraka ny toerana misy ny tsirairay. Ho hita eo…
Mampanontany tena ny sasany izay havoakan’ny ampitso. Tsy misy resaka firy, ohatra, ny amin’izay hoe foto-kevitra politika no hampiadiana, vinam-piarahamonina no tsy mampitovy fijery, fandaharanasa no hifampitahana… Tsangan’olona no olana? Na tsy hifampitahana an-toerana fa hifamitahana hahazoan-toerana… Hilamina izany rehetra izany rehefa mivoaka eo ny satan’ny mpanohitra sy ny fanoherana?
Mahavalalanina sy mahafanina efa tena manao ny asany ny sasany amin’ny mpanohitra? Na ho any na tsy ho any… Misy manohitra avy hatrany sahady, ohatra, izay tolo-dalàna momba ny satan’ny mpanohitra sy ny fanoherana izay. Tsy ifanomezan-tsiny: ny itsitokotokoan’ny loha, samy manana ny heviny. Izay ilay fanoherana? Politika io, ady fiady. Hanao ahoana rehefa tonga tokoa ny tokoa? Na ny fampiharana…
Amin’izany rehetra izany, efa nentina ka tonga hatrany ivelany izao ny raharaha: fitarainana, fandadiana rariny… Tsy mahay mifandamina an-toerana? Na azo antoka fa tsy azo na tsy mety hilamina intsony ny raharaha… Itakiana ny hevitry ny vahiny any ivelany, iandrasana torolalana, baiko, fanerena… Mandra-pahoviana? Eo hatrany ny hoe politika no atao, samy manao ny ataony arakaraka ny fifandanjan-kery.
Eny, na ny vahiny aza: ny tombontsoany no tena iadiany sy arovany na toy inona izay hoe fandaminana? Misy azy na ho azy ao… Rehefa tsy mahay sy tsy mety hifandamina ny tena samy tena, hitsabaka ho azy ny vahiny manahy ny fanelingelenana ny tombontsoany manokana? Vao mainka fa ny omena vahana amin’izany… Rahovina vao hiova ny mpanao politika sy ny fomba fanaovana politika?